China vegan eco makeup remover oil သည်ရေနံသန့်စင်စေသောရေနံသန့်စင်ဆေးထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | Iris အလှအပ
vegan eco makeup remover ရေနံပုဂ္ဂလိကတံဆိပ်သန့်စင်ဆေးရေနံသန့်စင် remover တက်ပါစေ
80% သံလွင်ဆီပုံသေနည်း, သက်သတ်လွတ်နှင့်ရက်စက်မှုအခမဲ့, သဘာဝအာဟာရအရေပြား, ခိုင်ခံ့သောသန့်ရှင်းရေးပါဝင်သည်။
EXW စျေးနှုန်း: 1.55 ~ 3.99 / PCS
1.Deep Cleansing ရေနံ မိတ်ကပ် remover သင်၏အသားအရေကို antioxidant ကြွယ်ဝသောသံလွင်ဆီဖြင့်အာဟာရပေးနေစဉ်ရေစိုခံ lipstick နှင့် mascara တို့မှအညစ်အကြေးများနှင့်အလှကုန်များအားလုံးကိုလုံးဝဖျက်သိမ်းသည်။
2. ထိရောက်သောဆီလတ်ဆတ်သောပါဝင်ပစ္စည်းများပါ ၀ င်သော၊ အသားအရေဆီလျှော်စွာထုတ်လွှတ်မှုကိုအတန်အသင့်တားဆီးခြင်း၊ အရေပြား PH တန်ဖိုး၊ အဆီအနှစ်များနှင့်အညစ်အကြေးများကိုမျှတစေသည်၊
3. မိတ်ကပ်ဝါဂွမ်းပေါ်တွင်သင့်တော်သောပမာဏကိုယူပြီးခြောက်သွေ့သောမျက်နှာပေါ်သို့နှိပ်နယ်ပါ။ ချက်ချင်းအလုပ်လုပ်သည်။ ရေကိုထည့်ပါ၊ ၎င်းသည်နို့ထွက်သော၊ ဗီတာမင်ကြွယ်ဝသောသုတ်ဆေးအဖြစ်သို့အသွင်ပြောင်းသွားပြီးသင့်အရေပြားကိုနူးညံ့။ ပျိုးထောင်ပေးသည်။ ဘယ်တော့မှအခြောက်သို့မဟုတ်ချောကျိကျိ။
မသုံးမီလှုပ်ပါ။ ပုံသေနည်းနှင့်အတူပြည့်စုံသောဝါဂွမ်း pad ပါနှင့်မျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုကျော်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်၏မျက်နှာသန့်စင်နှင့်သင်၏မျက်နှာကိုတဖန်ဆေးကြောပါ။ ဖယ်ရှားရန်ခက်ခဲသောမိတ်ကပ်အတွက်အရည်ပျော်စေရန်ချည်မျှင်များကို5စက္ကန့်ကြာအောင်ကိုင်ထားပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက် ၁။ သံလွင်ဆီပုံသေနည်း ၈၀% ပါ ၀ င်သည်
အရွယ်အစား 11 * 4.6 * 4.6 စင်တီမီတာ / pcs
ရှေ့သို့ Matte နှုတ်ခမ်းတိတ်တိတ်သောပုဂ္ဂလိကတံဆိပ်သည်နှုတ်ခမ်းချောင်းကိုရောင်းချသူသည် moisturizer ၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားဖြစ်သော Matte နှုတ်ခမ်းချောင်းကိုပြုလုပ်သည်
နောက်တစ်ခု: highlighter မိတ်ကပ်ရောင်းချသူအလှကုန်အမှတ်တံဆိပ် highlighter မိတ်ကပ် shimmer မျက်နှာ highlighter အမှုန့်အလှကုန်
Eco မိတ်ကပ် remover
ရေနံမိတ်ကပ် remover ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ်